Budada Qorraxda - Warshad Soo Saaraha
Budada gabbaldayaha (cabitaanka adag) waa mid aad u hodan ku ah waxyaabaha ku jira amino acid iyo fiitamiin E, A, C kadib soo saarid iyo enzymolysis bayooloji ah. Budada sunflower (cabitaan adag) ayaa inta badan ka kooban micro-molecules oo leh tiro molikal ah oo ka yar 1000u, taas oo ay fududahay in lagu nuugo jirka dadka isla markaana leh heer isticmaal sareeya.
Qeexitaanka budada gabbaldayaha
Product Name Budada gabbaldayaha
Nolosha nafta Furmin 24 bilood
Color Caddaan ama jaalle khafiifa
Storage Temperature Ku kaydi heerkulka qolka oo waa in la dhigaa meel qabow oo qalalan.
Furitaanka ka dib, sida ugu dhaqsaha badan u baabi'i si aad alaabta uga ilaaliso qoyaanka iyo agglomeration.
Application Cunto, kaabis daryeel caafimaad leh, cunto shaqeynaysa.
Waa maxay budada sunflower?
Budada Sunflower (cabitaan adag) waxaa laga helaa budada gabbaldayaha, iyada oo loo marayo habab badan
sida xulashada alaabta ceyriinka ah, soo saarista, enzymolysis bayoolaji, qalajinta iyo baakadaha, iwm.
Waa maxay faa'iidooyinka budada Sunflower?
Waxay ka caawisaa nidaaminta uric acid iyo helitaanka turqo hagaagsan
Inta badan dawooyinka jira ee lagu daweeyo gout iyo hyperuricemia waa daawooyin kiimiko ah, oo leh sun iyo waxyeelo badan. Sidaa darteed, cilmi-baarayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa waxaa ka go'an inay raadiyaan walxo firfircoon oo dabiici ah oo saameyn wanaagsan ku-bogsiinaya iyo sun ku yar dhirta dabiiciga ah. Marka loo eego xaqiijinta caafimaad ee dawada dhaqameedka iyo cilmi baarista dawada ee casriga ah, gabbaldayaha wuxuu leeyahay nashaadaadyo kaladuwan oo dawooyin. Daraasadda soosaarida gabbaldayaha, waxaa la ogaaday in soosaarida gabbaldayaha ay yareyso waxyaabaha uric acid ee dhiigga ku jira illaa xad waxayna leedahay saameyn xaddidan oo xaddidan oo ku saabsan waxqabadka xanthine oxidase ee ku jira dhiigga jiirka.
Qaado prostatitis joogto ah iyo qanjirka 'prostate hyperplasia improv'ed
Cudurka qanjirka 'prostatitis' waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee ku dhaca ragga da'da dhexe iyo kuwa da'da ah. Bukaanjiifka badankood waxay leeyihiin astaamo waaweyn sida kaadida oo adkaata, dheecaanka kaadida kadib iyo xanuunka xubnaha jirka. Sida laga soo xigtay wargeysyada caafimaadka, heerka daaweynta wuxuu gaadhay 80% bukaanada 100 ee kor ku xusan kuwaas oo lagu daweeyay budada ubax. Qanjirka 'Prostatic hyperplasia' sidoo kale waa cudur daba-dheer oo u gaar ah ragga waayeelka ah, dhacdooyinkaas oo ka sarreeya in ka badan 75%. Ka dib markay bukaanku cuneen budada ubaxa, waxaa jira xannibaadda qanjirka 'glandular hyperplasia', hoos u dhac ku yimaada mugga qanjidhada, iyo hagaajinta shaqada qaanuunka endocrine.
Hel faashalka beerka oo la hagaajiyo
Manka shinida ayaa saameyn muuqata ku leh cirrhosis-ka aalkolada ee ay keento cabbitaanka khamriga ee xad dhaafka ah, waxayna hagaajisaa shaqada beerka sida ugu dhaqsaha badan.
Saamaynta nidaamka wadnaha
Budada ubaxu waxay hodan ku tahay fiitamiinada iyo qaar ka mid ah xeryahooda flavonoids, oo saameyn wanaagsan ku leh xoojinta awooda caloosha, iyo kahortaga iyo daaweynta xanuunka isku-gudbinta qalliinka, dhiig-baxa maskaxda, dhiig-baxa isha, dhiig-karka, iyo kala-goysyada.
 Daraasad ku saabsan Waxqabadka Go-Gout iyo Anti-hyperuricemia ee Soosaarayaasha Madaxa Gabbaldayaha.
 Nafaqada iyo daryeelka caafimaad ee manka.
 Soo koobida nafaqada iyo shaqada manka.